बैशिकि toमा स्वागत छ
फ़ुज़ियान जिन्जिiang्ग बैशिकिंग कपडा बुनाई कं, लिमिटेडचीनको दक्षिणपूर्वी तटमा, पूर्वोत्तरको झेजिiang्ग प्रान्तसँग जोडिएको छ, उत्तरपश्चिममा जियांग्सी प्रान्त, दक्षिणपश्चिमीमा गुआंग्डोंग प्रान्त र दक्षिणपूर्वमा ताइवान जलडमनीको ताइवान प्रान्तको सामना गर्नुपर्दछ। कम्पनी १ 1990 1990 ० को दशकमा स्थापना भएको हो, clothing० वर्ष भन्दा बढी समृद्ध कपडा उत्पादन अनुभव छ, हामी विभिन्न प्रकारका अण्डरवियर र अंडरवियर ठूला उद्यमहरूको एक व्यावसायिक उत्पादन हौं। निर्माण क्षेत्र १ 15००० वर्ग मीटर छ।
हामीसँग तीन मुख्य प्रकारहरू छन्
अंडरवियर, योग सूट र swimsuit
अंडरवियर डिजाइन हामी पालन गर्छौं:शरीरको आकारको पालन गर्नुहोस्, मुटुमा सुन्दरता; कपडाको प्रयोग हामी पालन गर्छौं: सहज र उत्तम, स्वास्थ्य पहिले। प्रविधि को मामला मा,हामी पालन गर्छौं:उत्तम शरीर, रूपरेखा र सधैं साथ रूपरेखा। हामी योग सूट बनाउन उच्च गुणस्तरको कपडा छनौट गर्दछौं, जुन सुख्खा र चाँडै चाँडो गर्न सकिन्छ। दौड, योग, जम्पिंग, खेल उपकरण र अन्य खेल अभ्यासहरूका लागि उपयुक्त।
दुबै केटा र केटीहरूले स्विमसुट लगाउन सक्छन्। कपडा सुविधाहरू: नरम, आरामदायक, द्रुत सुकाउने, गैर-विषाक्त। आज डिजाइन शैली सबैभन्दा लोकप्रिय छ।
माथी माथीका हाम्रा उत्पादनहरू हुन्, उद्योगमा र खरिदकर्ताहरू विभिन्न क्रेताहरू उच्च प्रशंसा र प्रशंसाका हुन्।
इन्क्वायरमा स्वागत छ
अभियान: साझा विश्वासमा जम्मा गर्नुहोस्, र साझा दृष्टिकोणको लागि प्रयास गर्नुहोस्। उच्च गुणस्तरको कपडा र सेवा प्रदान गर्न एक उत्तम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली निर्माण गर्नुहोस्; हाम्रो प्रयासमार्फत राम्रो जीवन सिर्जना गर्नुहोस्!
विकास दर्शन: विविध प्रतिस्पर्धी किनाराको साथ अगाडि बढाउनुहोस्, गहन विकासमा छड्नुहोस्।
मूल्य: पूर्णता र निष्पक्षता ग्राहक पहिलो मान्छे-उन्मुख हार्ड काम
उद्यम आत्मा: हामी गर्छौ! हामी सक्छौ!
महान सर्कल मेसिन